coronavirus: Martin Vrijland
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	28 Meyi 2020	• 12 Comments
Izandi ezingaphezulu nangaphezulu ziyavela zokuba i-coronavirus inokuba yayenzelwe ngokwenene elebhu. Apho ndahlaselwa khona ekuqaleni ngababizi benyani baseNu.nl, xa ndakhankanya ukuba intsholongwane enjalo inokuthi ivele kwelebhu, ngoku yinto eqhelekileyo yokufumana ingxelo […]
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	26 Meyi 2020	• 4 Comments
Kwiinyanga nje zakutshanje, isiqingatha sehlabathi sidutyulwe sisoyika kakhulu intshaba ye-coronavirus engabonakaliyo. Isininzi asinalwazi malunga nokuba amajelo osasazo nezopolitiko, ngokubambisana nepiramidi yamandla (esele imile okoko kususela koko), abona umbono wehlabathi lethu. Phantse yonke into esiyibonayo kwaye ke siyakholelwa ukuba inombala njenge […]
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	25 Meyi 2020	• 15 Comments
Andinayo i-iPhone ngoko andikwazanga ukuyikhangela, kodwa iwebhusayithi ye-Apple icacile malunga nayo. Ngelishwa, bambalwa abafunda imigaqo kunye neemeko ngaphambi kokufaka uhlaziyo okanye i-app, kodwa ufumana nje i-tracking app ebandakanyiwe kuhlaziyo lwe-iOS 13.5. Ukuba uyandibuza, […]
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	22 Meyi 2020	• 13 Comments
Kwimizuzu engama-33 elandelayo, jonga uMaurice de Hond, indoda engasemva kwezopolitiko ezinkulu esinokuthi "sizithembe ngokupheleleyo". UDe Hond ufumanise ukuba uphononongo oluthile lubonisa ukuba umgaqo onesiqingatha semitha awunantsingiselo kwaye i-coronavirus ikakhulu isasazeka xa umoya ungalunganga. UMaurice uqinisekile ngoku […]
Ukuba ulandela amajelo osasazo, akukho ngxaki eNetherlands ngaphandle kwale ntsholongwane ye-corona, esele ilalisa njengebhombu yexesha lokukhonkotha. Buphi ubuntatheli xa kufikwa ekubonakaliseni ukubandezeleka kwabantu emva kweminyango yangaphambili yabaninzi? Akunzima kangako ukufumana amanani eRIVM […]
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	19 Meyi 2020	• 12 Comments
"Urhulumente usicela ukuba senze le nto kwaye ndilandela 'iBefehl ist Befehl'. Kuya kufuneka unikeze igama lakho kunye nenombolo ye-ID ukuze ube nokugcina umkhondo wokuba ngubani na onxibelelana naye. Ukuba awukwenzi le nto, ngekhe ungene esitolo, kodwa ungathenga nge-Intanethi nathi ”. Kulungile […]
Ngaba ubunzima bukaTrump besiya e-China ukuqala kokuwa kweedola kunye nokuwa kwezoqoqosho?
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	18 Meyi 2020	• 12 Comments
Ngokukhutshwa okulandelayo komgangatho wegolide kunye nomgangatho weoyile, idola yajika yaba yimali eza kuprintwa ngaphandle kwemida. Siyibiza ngokuba yimali yeFiat. Imali ye-Fiat ayilunganga kurhwebo lwamanye amazwe. Emva kwayo yonke loo nto, ukushicilela amakhulu ezigidi kubangela ukwehla kwemali. Kuba ibhanki ephakathi yase-US (i-FED) ilawula le nkqubo yokudala nedola […]
Intsingiselo yokwenyani ye-Elon Musk's kunye neeGrimes Baby X → A-12
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	9 Meyi 2020	• 13 Comments
Ngokumalunga nam, u-Elon Musk akasenguye nje umntu othengisa ngaphambili ekukhupheni i-DARPA, i-Arhente yoPhando ngezoKhuselo oluPhezulu oluvela e-US. I-DARPA yindawo apho kuye kwaveliswa ubuchwephesha obuphezulu, kubandakanya i-intanethi. Ewe kunjalo, kubantu abadala ungusomashishini ohlakaniphe kakhulu owenza yonke into […]
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	7 Meyi 2020	• 18 Comments
Imibuzo emibini? Ngaba uyafuna ukuba wena okanye abantwana bakho nihlale kwintolongo edijithali? Ngaba uyafuna ukuba wena okanye abantwana bakho ninyanzelwe kwisitofu sokugonya eningazi ukuba siqulathe ntoni ngaphandle koko kuxelelwa "ziingcali"? Ukuba akunjalo? Lixesha lokuba nemvukelo! […]
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	6 Meyi 2020	• 20 Comments
Abalungisi beenwele banokuphinda bavule, ulutsha lunokuvunyelwa ukuba luye kwindawo yokuzivocavoca kwakhona, iitima zingavuleka kwakhona. Okwangoku, wonke amashishini ayanyanzelwa ukuba abone ukuba angayifumana njani imitha enesiqingatha kwinkampani yabo. I-sausage yenkululeko yobuxoki iya kubanjwa phambi kwakho, ngelixa ukunyanzeliswa kungekudala kuya kuba yinto enyulu kwaye […]
Utyelelo lulonke: 2.526.194